Yakachipa Organic & Compound Fertilizer Rotary Drum Screening Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Iyo Michina Drum Sieving Machine chinhu chinowanzojairika mukugadzirwa kwe fetiraiza, inonyanya kushandiswa kupatsanura zvinhu zvakadzoserwa uye chigadzirwa chakapedzwa, zvakare ziva kupatsanurwa kwemagumo zvigadzirwa, uye kunyangwe kupatsanura zvigadzirwa zvekupedzisira.
Chii chinonzi Rotary Drum Sieving Machine?
Michina Drum Sieving Machine inowanzoshandiswa kupatsanurwa kweakapedza zvigadzirwa (hupfu kana granules) uye zvinhu zvekudzoka, uye zvakare inogona kuona kuiswa kweyezvigadzirwa, kuitira kuti zvigadzirwa zvakapedziswa (hupfu kana granule) zvigone kuenzaniswa zvakaenzana.
Iyo mhando nyowani yekuzvichenesa yega-yekuongorora yakakosha michina. Inoshandiswa zvakanyanya mukuongorora dzakasiyana siyana solid zvinhu izvo granularity isingasviki 300mm. Iyo ine yakanyanya kushanda, yakaderera ruzha, shoma guruva, hupenyu hwakareba sevhisi, kushoma kwekuchengetedza, nyore kugadzirisa uye nezvimwe zvakawanda maficha. Iko kugona kwekuongorora kuri 60 matani / awa ~ 1000 matani / awa. Icho chakakodzera michina mukugadzira nzira ye organic fetiraiza uye komputa fetiraiza.
Kuzvichenesa Michina Drum Sieving Machine inoita kutenderera kunonzwisisika kwemidziyo yepakati kupatsanura humburumbira kuburikidza neiyo gearbox mhando yekudzora sisitimu. Iyo yepakati kupatsanura humburumbira chiono chakaumbwa neakawanda annular sandara simbi mhete. Iyo yepakati yekuparadzanisa humburumbira inoiswa pamwe nepasi ndege. Munzvimbo yakatetepa, izvo zvinhu zvinopinda musirinda mambure kubva kumusoro kwekumusoro kwepakati pekuparadzanisa humburumbira panguva yekushanda. Munguva yekutenderera kwesirinda yekuparadzanisa, iyo yakanaka zvinhu inopatsanurwa kubva kumusoro kuenda pasi kuburikidza nechidzitiro chenguva inoumbwa neyakavanzika simbi, uye izvo zvinhu zvakasarudzika zvakapatsanurwa kubva kumucheto wezasi wesirinda yekuparadzanisa uye inozoendeswa mukati crusher muchina. rChigadzirwa chinopihwa neplate mhando otomatiki yekuchenesa mashini. Munguva yekuparadzanisa maitiro, iyo skrini yemuviri inoenderera "ichichekwa" neyekuchenesa mashandiro kuburikidza nehukama kufamba kweyekuchenesa mashandiro uye nesefa muviri, kuitira kuti iyo nesefa muviri unogara uchicheneswa mukati mekushanda kwacho. Izvo hazvizokanganisa iko kuongorora kweyekuita nekuda kwekuvhara kwechidzitiro.
Performance Zvinoitwa Rotary Drum Sieving Machine
1. Kunyatsoongorora kushanda zvakanaka. Nekuti iyo michina ine ndiro yekuchenesa mashandiro, haimbofi yakavharidzira iyo skrini, nekudaro ichivandudza iko kuongorora kwekuongorora kwemidziyo.
2. Nzvimbo yakanaka yekushanda. Iyo yese yekuongorora michina yakagadzirirwa mune yakavharidzirwa guruva chifukidziro, kubvisa zvachose guruva rinobhururuka chiitiko mukuongorora uye kugadzirisa nzvimbo inoshanda.
3. Ruzha rwepasi pemidziyo. Munguva yekushanda, ruzha rwunogadzirwa nezvinhu uye iyo inotenderera skrini yakasarudzika zvachose neyakavharwa guruva chifukidzo, icho chinodzora midziyo ruzha.
4. Kugadziriswa kwakanaka. Ichi chishandiso chinoisa mucherechedzo hwindo rekutarisa michina pamativi ese evhavha yeguruva, uye vashandi vanogona kucherechedza mashandiro emidziyo chero nguva panguva yebasa.
5.Long upenyu basa. Ichi chishandiso chemuchina chinoumbwa neakaverengeka annular sandara simbi, uye yaro muchinjikwa-chikamu chikamu chakakura kwazvo kupfuura iyo skrini yekuyambuka-chikamu chikamu cheimwe yekuparadzanisa michina skrini.
Michina Drum Sieving Machine Vhidhiyo Ratidza
Michina Drum Sieving Machine Model Sarudzo
Inotenderera Yekumhanya (r / min)
Kunopindirana Saizi (mm)
Pashure: Counter Kuyerera Kutonhora Machine
Zvadaro: Linear Vibrating Screener